Sihlalutya isithethi seMusic Box 9 esinamandla kwi-Energy Sistem | I-Androidsis
Namhlanje siza kuthetha ISITHETHE seBluetooth ngoonobumba abakhulu. Ngoncedo lwabahlobo bethu abavela kwi-Energy Sistem sonwabile ngokuvavanya esona sandisi-lizwi sinamandla kunabo bonke abo bathe badlula kwi-Androidsis. Isixhobo esiphathwayo esihambisa umculo esingazange sibe nawo ngaphambili.
Kukho izithethi ezininzi esiye sazivavanya kwi-Androidsis, kodwa Ibhokisi yoMculo weSistem yamandla 9 ukwazile ukugqama kwabanye. Isithethi esiza kwenza ingxolo eninzi. Ngombulelo kumandla angenakuthelekiswa nanto, amava esandi esiwanikelayo achaza ukuba yintoni amandla eSistem yaMandla.
1 Ukuzimela, amandla kunye noyilo, cela konke
2 Umahluko kunye nokuhambelana ngokupheleleyo
3 Uyilo oluhle kwaye olungenangqondo
4 Ukuzimela ixesha elide, isigqi masingayeki!
5 Ibhokisi yedatha ye-Energy Sistem Music
Ukuzimela, amandla kunye noyilo, cela konke
Uyilo ngoku yenye yezona zinto zibalulekileyo xa usenza nayiphi na imveliso. Sibona njani iifom ziguqukile zombini kwii-smartphones nakwizincedisi. Kwaye intengiso igcwele izixhobo zazo zonke iintlobo zeemilo kunye nobukhulu. Ukuba ujonga izithethi, nazo ziye zavela kakhulu.
Sifumana kwimarike ezinye iindlela zobume obahlukeneyo kunye nemibala. Kwaye kunye nezibonelelo zazo zonke izinto ozithandayo kunye neemfuno. Ibhokisi yoMculo ye-Energy Sistem 9 ine uyilo olusengqiqweni nolulula. Kodwa kwangaxeshanye unika amandla okusindisa ukuze ukonwabele umculo owuthandayo naphina.
Ukuba ujonga isithethi esishelufini, kwaye ungasithatha, iBhokisi yoMculo 9 ngumgqatswa okhuselekileyo, kwaye ucofa apha ungathenga ngesaphulelo se-15% kwiAmazon. Uluhlu oluhle olunamandla, isandi esicocekileyo kunye neebhasi ezinzulu. Isandi sinyuka kwinqanaba kwesi sithethi sibizelwe ukulawula kulo naliphi na igumbi elinesandi.
Umahluko kunye nokuhambelana ngokupheleleyo
Isithethi seMandla eSistem Music Box 9 isithethi seBluetooth sime kwizinto ezininzi. Ukongeza kwifayile ye- entle kwaye intle ngobuhlekunye amandla azenza azive. Esi sithethi sineendlela ezininzi "zokusasaza" kunye nesandi ngaphaya. Enkosi kwi Itekhnoloji yeWales eyinyani, efanayo naleyo ifunyenwe kwii-headphone ezingenazingcingo, singayidibanisa nesinye isithethi ngokufanayo. Okanye nezinye ezihambelanayo zenkampani efanayo. Ukudibanisa okumenza ukuba afumane amanqaku xa kuthelekiswa neentshaba zakhe.
Sikwanayo igalelo elahlukileyo ukwenzela ukuba uqhagamshelo lweBluetooth ayisiyiyo yodwa. Singawonwabela umculo wethu ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuqhagamshela isixhobo esincedisayo enkosi kwikhebula esilifumene ebhokisini. Sinokwazisa Ikhadi le-SD elincinci ngomculo oza kudlala kwiBhokisi yoMculo 9. Ukongeza ekubeni ukwazi ukudibanisa ezinye izixhobo zesandi ngokusebenzisa Izibuko le-USB.
Kwaye okokugqibela, into eyongezelelweyo ebesithanda ukuyifumana, kwaye oko kutsala umdla wethu. I-Energy Sistem Music Box 9 iza ixhotyisiwe Isikhululo sikanomathotholo se-FM. Sinako ukungena nokurekhoda ukuya kwii-tunings ezahlukeneyo ezingama-50 kwaye sonwabele isikhululo sethu esisithandayo. Unomathotholo yinto ethi abavelisi abaninzi baphelelwe lixesha, kodwa yeyiphi i-Energy Sistem ebonelela izithethi zayo ngokusebenza okukhulu.
Uyilo oluhle kwaye olungenangqondo
IBhokisi yoMculo ye-Energy Sistem 9 ibonisa uyilo olukude kakhulu nokujonga kwezithethi ezinemibala eqaqambileyo. Ngobubi, sinayo isithethi esimnyama esimnyama, ene-tIjika ezigoso kwizinto zerabha. Su ujonge kakuhle inomtsalane ke umzobo yemigca yayo. Singatsho ukuba sisithethi seBluetooth esinzulu nesinobuchwephesha, esibona amanqaku asinikezelayo kungothusi.
Ukuvavanywa kweBhokisi yoMculo 9 ngamacandelo esiwafumanayo egudileyo ngaphambili, Iikona ezigobileyo ukuze zidibane kakuhle kwisakhelo esenziwe ngezinto ezifanayo nezinye. Sibona ilogo ye-Energy Sistem kwikona esezantsi ekhohlo… kwaye ayikho enye into. Ngokwenyani, ngaphambili asifuni ngaphezulu koko sikubonayo.
Kulo phezulu i amaqhosha olawulo lokudlala. Sinefayile ye- layita icima, umthamo kunye nokudibanisa, dlala / nqumama kunye nokudlulisa imikhondo ngaphambili okanye ngasemva. Yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukulawula ukudlala komculo ngendlela othanda ngayo kwisithethi uqobo. Ukwazi ukuba sinokuyilawula kwakhona kwi-smartphone yethu okanye kwisixhobo okhetha ukusidibanisa.
Kulo Icala Elilungile encontramos amaqhosha amabini. Enye yazo for qhubelela kwi qhagamshela kunye nesinye isixhobo kwaye uhambise isandi sestiriyo. Ukucinezelwa kukhangela esinye isithethi ukuze usidibanise nesithethi sasekhohlo okanye sasekunene. Kwelinye iqhosha sinako khetha imowudi yokufaka umculo kwisixhobo. Singakhetha phakathi kokukhetha ibluetooth, izibuko le-USB lokudlala, ikhadi le-SD elincinci okanye irediyo ye-FM.
Ukuba ujonga icale lasekhohlo sizifumene zonke ugwebu kunye namazibuko outlet zombini iaudio kunye neyangoku. Sine iplagi yokubiza ibhetri. Nantsi into esingayithandiyo, ngaphandle akukho USB encinci, akukho hlobo lwe-USB CIgalelo langoku elahlukileyo. Sikwanayo igalelo lomsindo elincedisayo, ze i-USB kunye imemori khadi.
Kulo ngasemva, sifumene inwebu yentshukumo okhethekileyo. Ukulandela umgca woyilo ngononophelo, kwiBhokisi yoMculo 9, iSistem yaMandla ivula isisombululo esinomtsalane. Inwebu, kunye uxande kunye nemilo esembindini enelogo enkulu yokutyikitya embindini. Kwaye ngombala werabha kunye namandla amakhulu okuhamba, kubonakala kuhle ngasemva.
Thenga ngesaphulelo se-15% kwiAmazon iBhokisi yoMculo ye-Energy Sistem 9
Ukuzimela ixesha elide, isigqi masingayeki!
Olunye lweempawu ezibalulekileyo kwizithethi eziphathwayo zeBluetooth kukwazimela. Isixhobo ekufuneka siye kuso kufuneka sibe nebhetri eyaneleyo ukuze usuku lomculo lungaze lusilele. Ukuze le nto ingenzeki Ibhokisi yoMculo ye-Energy Sistem ine-4.000 mAh ibhetri ezolula ngaphezulu kunokuba bekulindelwe.
Kwizixhobo ze-elektroniki, Ubomi bebhetri bunemibala emininzi. Ngakumbi kwisithethi esinamanqanaba amandla ahlukeneyo kunye neentlobo ezahlukeneyo zokuvelisa kwakhona. Umenzi usenzela itafile kunye nobomi bebhetri kuxhomekeka kuhlobo losetyenziso esiza kulinika lona. Nangona kufuneka sazi ukuba nayo iyakusebenza iqhagamshelwe kwinethiwekhi yombane.
El ixesha lokutshaja ngokupheleleyo ukwazi ukuba ne-100% ye-4000 mAh 2 iiyure kunye nesiqingatha. Ngebhetri yonke ehlawulisiweyo sinokufikelela Ukusetyenziswa kweeyure ezingama-20 kumthamo wama-50% amandla. Iikhonkwane Iiyure ezili-14 ukuba siyisebenzisa nevolumu kwi-70%. Kwaye ngaphezulu kokundilisekileyo Ukusetyenziswa kweeyure ezingama-4 kumthamo wama-100%. Ngokuqinisekileyo amanani alungileyo anokuqwalaselwa.
Ibhokisi yedatha ye-Energy Sistem Music
Umzekelo Ibhokisi yoMculo 9
Technology TWS SI
Inkqubo yesandi 2.0
Unxibelelwano lweBluetooth 4.2
Unxibelelwano olongezelelweyo I-USB-indawo encinci ye-SD-encedisayo kwisandi
Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 (kuxhomekeke kwinqanaba levolumu)
Imilinganiselo X x 310 120 106 mm
U bunzima 2.085 kg
Ixabiso 84.91 €
Ikhonkco lokuthenga Ibhokisi yoMculo weSistem yamandla 9
Asinakufihla ukuba isithethi seBhokisi yoMculo esivela kwi-Energy Sistem sisidanyisile. Kwaye sayithanda ngezizathu ezahlukeneyo. Inkangeleko yomzimba yindawo ehambelana kakhulu, kodwa ukuphuma kumkhwa we-avant-garde aesthetics kunye nokukhetha imigca yeeklasikhi kunye neemilo, ngokungathandabuzekiyo kuyenza ibonakale ngakumbi.
Amandla ayo ngevolumu ephezulu ayamangalisa. Umculo uziva ucocekile ngalo lonke ixesha. Ngaba zero zero kunye Inkcazo yeebhasi kunye nokuhamba okulungele izixhobo ezifanelekileyo. Isitiya sakho, ikhaya lakho, okanye usise naphina apho ufuna khona, ibhokisi yomculo 9 ayizukukuphoxa.
Uyilo olusengqiqweni kunye nembonakalo yobungcali
Amandla amakhulu ngaphandle kokugqwetha
Umgangatho wesandi kunye neebhasi ezibukhali kunye nokuhamba
Amandla ebhetri kunye nokuzimela
Ukungafani kunye nokunxibelelana
Isinxibelelanisi sokutshaja asiyiyo i-USB encinci okanye i-USB Type C
Ubungakanani obukhulu kunye nobunzima bezothutho
Ukutsiba kumgangatho kunye namandla kufuneka kuhlawulwe nge-euro
Imizila yeenyawo iphawulwa ngokulula
Ibhokisi yoMculo 9
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » I-Energy Sistem Music Box 9 uhlalutyo lwesithethi